Science & Religion » ဘာသာရေး နှင့် အာဏာရှင်စနစ်	44
ဘယ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲလို့။ အဲဒီအကြောင်းမျိုး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် က ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
ဂျစ်စူ says: ဗုဒ္ဓ အလာ ခရစ် စတာ တွေ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘာသာရေးကြောင့် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ဘာသာမဲ့တွေမှာ အာဏာရှင် စနစ် မဖြစ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါ။ ဘာလို့ဆို ကွန်မြူနစ်တွေဟာလည်း ဘာသာမဲ့ပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်ပဲ။ သဘောက မဖြူဘူး ဆိုတာနဲ့ မမည်းဘူး။ မမည်းဘူး ဆိုတာနဲ့ မဖြူဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေ ဘာသာမဲ့တွေ များလာတယ်။ ပြီးတော့တစ်ခါ ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲဧရာမတွေဟာ ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်တာများတယ်။ ဘာသာရေးဟာ ဟိုလေ မိန်းမလိုပဲ။ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း။ အဲဒါကြောင့် ဘာသာရေးမှာ ဟိုဘက် ဒီဘက် နှစ်ဖက်စွန်းကို မရောက်ဘဲ ခေတ်စနစ် (လူ့အခွင့်အရေးနဲ့အညီ) ခေါင်းကို ဖွင့်သင့်တာဖွင့်ပြီး လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဂျစ်စူ says: ဘွားဒေါ် အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ်
အတ္တကင်းတယ် ကဲ ဘလိုဆက်ငြင်းမလဲ ☺
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟိုဘက်ပို့စ် ပြန်ဖတ်ကြည့်လေ။
Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: ဘာသာ​ရေးအကဲဆတ်​တဲ့တိုင်းပြည်​ရဲ့ ဒီ​ရေချိန်​မျိုးမှာ Global icon ကြီးမပါ​ကြေး … သူ​တောင်​ ထိပ်​တိုက်​မ​တွေ့​သေးပဲ တဖြည်းဖြည်းပြင်​ယူ​နေတယ်​လို့ မြင်​ပါတယ်​ …
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကိုဆော ပြောတာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: ဒီဘာသာထဲက လူတချို့ မကောင်းတာနဲ့ ဒီဘာသာ မကောင်းဘူးလို့လဲ ပြောလို့ မရနိုင်ပါ။ :-)))
Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Thint Aye Yeik says: အိုဘယ့် ဘာသာရေးနဲ့
မြစပဲရိုး says: ညီမပြုံး ဆွေးနွေးဖို့ အစ ဖော်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဒါကြောင့်လဲ သူကြီး မှာ ဒီလို မေတ္တာစိတ် ရှေ့ထားတတ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာ များ နဲ့ မဆုံဖူးလို့ ဒီလို သိမ်းကျုံးဝေဖန် နေတာ လို့ ဘဲ ကျွန်မ လက်ခံထားလိုက်ပါတော့မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဒီမှာအကြိမ်ကြိမ်ရေးဖူးပါတယ်..။
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တော်ပါတော့ မဟာသူကြီးမင်း ရယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3140
ဈာန်​ says: ရွှီးးးးးးး
ဒီကွန်​မန့်​​လေး ဖတ်​ရတာ အရသာရှိလိုက်​တာာာ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Thanks ကဆာမိ။ :-))
Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဒီလိုကိစ္စ.. ပြဿနာ.. ကျိန်စာလွတ်ဖို့က.. ၁နှစ်၂နှစ်.. ၅နှစ်၁၀နှစ်နဲ့မပြီး…။
ကျုပ်ဘာလုပ်နေလဲ.. အရီးလတ် ..ရိုးတိုးရိပ်တိတ်တောင်… မသိတာ အံ့သြစရာ… Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အရီးကွ ဘရာဗို အရီးဘက်နေရှိတယ်။
ဂျစ်စူ says: ဟိုဟာ ကိုးကွယ်လဲ မလွတ်
kai says: အိုအသင်… ၂၁ရာစုလူသား.. ဘာကိုမှမကိုးကွယ်ပါနဲ့..။
မြစပဲရိုး says: စိတ်မပူပါနဲ့ သူကြီးရယ်။
(ကြို ပြောထားမယ်။အပြာရောင် တရား ကိုလဲ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်အောင် လှည့်ဖျားမှု နဲ့ ဗျင်းမှာလို့) ဒီနေ့ တောင် Facebook ထဲ က Post တစ်ပုဒ် ကို ဖတ်ပြီး ရီရမလို ငိုရမလို ဘဲ။ (အောက်တွင် တွဲ ထည့်ထားသည်)
ဂျစ်စူ says: ဒေါ်စု တခါပြောဖူးတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: ဆုတ်ခေတ်မှာ သိပ်မမျှော်လင့်တာ ကောင်းတယ် အံတီမျှစ်… သက်သာသလိုနေ။။
Wow says: ချချ …. အမှန်က မဝင့်လိုထင်ရာခေါင်းမာမာ ပြောရဲတဲ့သူတွေက ခေတ်တခေတ်ပြောင်းဖို့အတွက် တော်တော်လိုတယ်ဗျ
မြစပဲရိုး says: ဒီရက်ထဲ မှာ Study တစ်ခု အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။
အဲဒါကို “echo chamber” “ကိုယ့်ပဲ့တင်သံကိုဘဲ ကိုယ်ပြန်ကြားရတဲ့ အလုံပိတ်အခန်း လေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး နဲ့ တင်စားထားပါတယ်။ ဒီလို လူ တွေ ဒီလို အမြင်ကျဉ်းကုန်တာ ဟာ Facebook ကြောင့်လို့ ပြောကြပါတယ်တဲ့။
ဆိုတော့ တကယ်ဘဲ Facebook က တရားခံ တဲ့လား? ဒီလိုပါဘဲ။
:-)))) PS –
မြ ရဲ့ အစွန်းထွက် က တော့ လေဒီ ကို ချစ်လွန်းလို့ ဟု တွေးကြပါလော့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဒီတစ်ခါတော့ လေဒီမြကို အလျှော့ပေးလိုက်ပြီ
မြစပဲရိုး says: သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ။ <3 <3 <3 :-))))
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်ဘော်ကကဲကဲ..
uncle gyi says: ကြိုက်န်ှစ်သက်မိသောစာစုများ
kai says: ကျုပ်ကတော့.. အစိုးရကလုပ်ရဲမယ် မထင်ရေးးးးးချ…. မထင်..။
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ရဲ့ လူသေလူဖြစ် ဝါဒ ကို အမြင်မတူ လို့ မမှန်ဘူး မပြောပါဘူး။
kai says: အရီးလတ်ကတော့လေ…
ဒုက္ခ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မဟုတ် ငြင်းပေါ့ သူကြီးမင်း ရယ်။
စောဒီး လို့ ပြောမှာပါ့။ :D Was this answer helpful?LikeDislike 14459
ကဲ.. မင်းက.. သိပ်လေးစားပုံမရှိ..ငရဲပြည်ဆိုပြီး.. လမ်းညွှန်နိုင်သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: လိုက်မမှီတော့ဘူး ….
မြစပဲရိုး says: အခု ပြသနာ က
သူကြီး ဆီက လူသေလူဖြစ်ဝါဒ ထွက်လာတာ အမြတ်ဘဲ။ :D Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: သား ပြောချင်တာကလေ ….
အါ့မို့လည်း ကျနော်နဲ့ မတည့်တာ အဟီ <3 :P
မြစပဲရိုး says: Whatever the BLUEs won. :-))))
မကြည်စင်လေး ကို သနား Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: စိန်ကြက်ဆင် နဲ့ မတည့်တာပါ။
အောင် မိုးသူ says: အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလောက် ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ ရာသီဥတုထဲ မိန်းမတွေကို စောင်မည်းကြီး ခေါင်းမြီးခြုံထားနိုင်အောင် ဘာသာရေးက စွမ်းပြီဆိုမှတော့ အဲဒီ တိုင်းပြည်တွေကို အုပ်ချုပ်စရာ အာဏာရှင်ကို မလိုအပ်ဘူး။ သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်ပြီးသား။ ကြိုက်တယ် အန်တီ
koyinmaung says: နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်ရင်
koyinmaung says: အာဏာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်ဖြစ်ဘို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ယင် ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်
ကပ္ပိယ သာဒင်​ says: သူပြောသလိုသာဆို
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ရော ဘကြီးရယ် ခက်ပါဘိ။ အောက်မှာ နီကိုလေး ဖြေပေးထားသလိုပဲ။ အဲဒါ အဖြေလို့ ယုံတယ်။
nicolus agral says: ကျနော့်အမြင်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်က ပြောတာကို တစ်ဆင့်ပြန်ကြားခဲ့တာလေး သဘောကျလို့ . . . ဘာသာတရားဆိုတာ ethic ပဲတဲ့ . . . ငါတ်ို့မှာ ethic ရှိနေရင် ဘယ်ဘာသာကိုမှ ကိုးကွယ်စရာမလိုဘူး တဲ့ . . . ငါတ်ုိ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးဘူး . . . ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အားကိုးတယ်တဲ့ . . . ကိုယ်လည်း ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် . . . အဲဒါ ဘုရားဟောတဲ့ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော လို့ . . . (အဲဒါ ဘုရားဟောမှန်း ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲလို့ လာမမေးနဲ့နော်)
kai says: တရားဂုဏ်တော်ထဲ.. ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးပေးရမှာပါတယ်.။
အထူးသဖြင့်.. ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြောက်သမားတွေကို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.